Isbedelada dhaqaalah ee suuqa, maxay yihiin? | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Casudi casals | | Crisis, Dhaqaalaha guud
Waa lagama maarmaan in la barto waxyaabaha ka duwan doorsoomayaasha dhaqaalaha, si loo ogaado waxa ay yihiin iyo sida ay noo saameynayaan muwaadin ahaan.
Sababtaas awgeed, xagga hoose waxaan kuu sheegeynaa waxkasta oo laxiriira doorsoomayaasha dhaqalaaha iyo mid dhaqaale.
1 Doorsoomayaasha macroeconomic, maxay u yihiin?
2 Maxaa daraasadaha dhaqaalaha loo isticmaali karaa
3 Jawiga siyaasadeed iyo kala duwanaanta dhaqaalaha
4 Xeeladaha la adeegsado
5 Maxaa dhacaya markaad maal gashato dibadda
6 Maxay yihiin isbeddelada dhaqaalaha ee ugu habboon
6.1 Wadarta wax soo saarka gudaha
6.2 Lacagta halista
6.2.1 Sidee loo xisaabiyaa khidmaddaas?
6.3.1 Waa maxay waxyaabaha ka dhaca gudaha sicir bararka
6.4 Heerarka dulsaarka ee kala duwanaanta dhaqaalaha
6.5 Heerka sarifka
6.6 Isku dheelitirka lacagaha
7 Shaqo la'aanta oo ah mid dhaqaale ahaan kala duwan
8 Tilmaamayaasha saadka iyo dalabka ee kala duwanaanshaha dhaqaalaha
9 Isugeyn baahida iyo saadka
10 Isbedelada dhaqaalaha-yar: maxay yihiin?
Doorsoomayaasha macroeconomic, maxay u yihiin?
La Ujeedada doorsoomayaasha dhaqaalaha, diirada saar sidii loo ogaan lahaa nooca dhaq dhaqaaqa dhaqaale ee wadan iyo waliba aasaas ahaan in la rumeysan yahay inuu isbeddelayo bilaha isla goobtaas. Si loo fuliyo tirakoobyadan, waxa la qabtay ayaa ah xisaabta ku darso tilmaamayaasha qaarkood oo aan ku ogaan doonno xaaladda dhaqaale ee dalka, waa maxay heerkooda tartanka adduunka iyo xagee buu ku wajahan yahay dalka.
Kadib sameynta daraasaddan waad ogaan kartaa waa kuwee shirkadaha ugu waxqabadka fiican dalka gudihiisa iyo waliba, in la ogeysiiyo shirkadaha ugu fiican ee ku dhex yaal waddankaas.
Maxaa daraasadaha dhaqaalaha loo isticmaali karaa
Daraasadaha ku saabsan isbeddelada dhaqaalaha ayaa loo isticmaali karaa in lagu iibsado hal ama in ka badan shirkado dal gudahiisa ah. Dhaqaalaha dhaqaalaha waa muhiim maxaa yeelay waa midka iyada oo loo marayo shuruudaha iyo talooyinka siyaasadeed, mid maaliyadeed iyo mid lacageed.
Iyada oo loo marayo doorsoomayaasha dhaqalaha yar yar waxaad garan kartaa xasilinta qiimaha waxyaabaha wadan gudahiisa suuqa xorta ah. Waxaa la fahansan yahay in wadanku xasiloon yahay marka qiimaha uusan kor u kicin ama hoos u dhicin waqti kasta.
Iyada oo loo marayo dhaqaalaha, waxaa la isku dayey in la helo heer buuxa oo shaqo dhammaan dadka ku nool waddan. Dhaqaalaha dhaqaalaha wuxuu diiradda saarayaa barashada dhammaan xeerarka ku xiran waddan la leh dalalka kale ee adduunka.
Jawiga siyaasadeed iyo kala duwanaanta dhaqaalaha
Falanqaynta lagu sameeyay ogaanshaha noocyada dhaqaalaha, waa in marwalba la fuliyaa si ay awood ugu yeeshaan go'aaminta nooc kasta oo khatar siyaasadeed ah oo ku wajahan dhaqaalaha hadda jira ama dhaqaalaha mustaqbalka.
Markii la aqbalo maalgashiga dibedda ka imanaya, khatartan ayaa labanlaabaysaa maaddaama dawladda wax iibinaysaa ay qarin karto waxqabadka ama xitaa la wareegi karto hantida shirkadaha.
Xeeladaha la adeegsado
Tan waxaa lagu samayn karaa iyadoo la isku hagaajinayo lacagaha ka soo xarooda mashruuca dhexdiisa. Waxa kale oo aad ku samayn kartaa adiga oo isticmaalaya sicir-dhimista lagu hagaajinayo halista wadarta miisaaniyadda dalka.
Habka saxda ah ee loo sameeyo waa hagaajinta socodka lacagta ee mashaariicda shaqsiyeed kuwaas oo u adeegsanaya goob caalami ah mashaariic kala duwan.
Maxaa dhacaya markaad maal gashato dibadda
Goorma ayaa la aqbalaa maalgashi shisheeye, halistaan ​​waa la laba jibaaray tan iyo markii dowlada wax iibisa ay qarin karto waxqabadka ama xitaa la wareegi karto hantida shirkadaha.
Tan waxaa lagu samayn karaa iyadoo la isku hagaajinayo lacagaha ka soo xarooda mashruuca dhexdiisa. Waxa kale oo aad ku samayn kartaa adiga oo isticmaalaya sicir-dhimista kuwaas oo lagu hagaajinayo halista wadarta miisaaniyadda dalka.
Habka saxda ah ee tan loo sameyn karo waa iyada oo la isku hagaajiyo socodka lacagaha ee mashaariicda shaqsiyadeed ee ka faa'iideysta hagaajinta caalamiga ah ee mashaariicda kala duwan.
Maxay yihiin isbeddelada dhaqaalaha ee ugu habboon
Marka xigta waxaan si dhow u eegi doonaa doorsoomayaasha dhaqalaaha dhaqalaha:
Wadarta wax soo saarka gudaha
Isbeddelka dhaqaale ee dhaqaale, mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee la tixgeliyo ayaa ah Miisaaniyadda. Tani waa qiimaha adeegyada iyo badeecadaha dal ay soo saaraan shirkado. Dadka ka shaqeeya aagga inta lagu jiro waqti cayiman ayaa sidoo kale la tiriyaa. Qaybaha dhaqaalaha ee ku jira kiiskan waa hoose, dhexe iyo jaamacadeed.
Si loo helo a dhabta ah isbeddelka dhaqaalaha, dhammaan badeecadaha lagu soo saaray waddankaas waa in lagu xisaabtamo, iyadoon loo eegin in la iibiyey iyo in kale. Wadarta wax walba sidoo kale waxaa ku jira shirkadaha caalamiga ah. Tusaale ahaan, haddii aan raadineyno doorsoomaha Isbaanishka, shirkadaha shisheeye sidoo kale waa la tixgelin doonaa.
Miisaaniyadda waddan ahaan
Khatarta halista ama halista waddan, waa sheyga labaad ee ay tahay in lagu xisaabtamo marka la xisaabinayo noocyada dhaqaalaha kala duwan. Lacagta halista ahi waa lacagta ay maalgashadayaashu bixiyaan markay wax iibsanayaan deyn dal leeyahay.
Kharashaadkan dheeriga ah ayaa looga baahan yahay dhammaan maalgashadayaashu inay ku iibsadaan dammaanad waddan kasta. Maalgashadayaasha waxaa lasiiyaa soocelin heer sare ah markay halis galiyaan inay wax ka iibsadaan dalal si ay u helaan soocelin wanaagsan.
Sidee loo xisaabiyaa khidmaddaas?
Dhammaan waddamadu waxay soo saaraan curaar lagu beddelay suuqyada sare oo heerka dulsaarka lagu saleeyo hadba baahida loo qabo. Lacagta caymiska ayaa laga xisaabinayaa farqiga u dhexeeya 10-sano oo bond ah oo waddan ka tirsan Midowga Yurub uu leeyahay, marka la barbar dhigo kuwa ay bixiso Jarmalka.
Sicir bararku wuxuu ka mid yahay doorsoomayaasha dhaqaalaha ka sii muhiimsan, maxaa yeelay waa midda si toos ah u tilmaameysa kororka qiimaha qaab guud.
Guud ahaan, koontada halka sano ah ayaa la sameeyaa tanina kuma koobna oo keliya alaabada waddan, laakiin sidoo kale dhammaan adeegyada.
Waa maxay sicir bararku?
Waa maxay waxyaabaha ka dhaca gudaha sicir bararka
Gudaha sicir barar waxaa jira arrimo badan. Mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ayaa ah dalabka; Marka dalabka dalku kordho, laakiin dalku uusan diyaar u ahayn, waxaa kor u kaca qiimaha.
Ta labaad waa bixinta. Markay taasi dhacdo waa sababta oo ah qiimaha waxsoosaarayaashu waxay bilaabaan inay kordhaan waxayna bilaabaan inay kordhiyaan qiimaha si ay u ilaashadaan faa'iidadooda.
Waxaa qoray sababaha bulshada. Tani waxay dhacdaa haddii qiimaha kororka la filayo mustaqbalka, laakiin kuwa wax soo uruuriya waxay bilaabaan inay lacag qaali ah ka qaadaan waqtiga ka hor.
Heerarka dulsaarka ee kala duwanaanta dhaqaalaha
Waa qodob kale oo lagu xisaabtamo kala duwanaanshaha dhaqaalaha. Waddan gudahiisa, dulsaarka ugu muhiimsan waa kan uu dejiyey bangiga dhexe. Lacagta ayaa dowlada ay ku amaahdaa bangiyada bangiyadan ayaa iyaguna markooda siiya bangiyada kale ama shaqsiyaad.
Marka lacagtaas la amaahdo, waxay ku saleysan tahay dulsaarka bangigaas waana in lagu soo celiyaa lacagta inteeda kale.
Qodob kale oo muhiim ah ayaa ku jira doorsoomayaasha dhaqalaha dhaqalaaha waa heerka sarrifka. Heerka sarrifka ayaa had iyo jeer lagu cabiraa inta udhaxeysa laba lacag oo waaweyn tan waxaa sidoo kale go'aamiya Bankiga Dhexe ee Yurub. Qiimaha sarrifku waa mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan marka laga hadlayo ogaanshaha in lacagta waddanku hoos u dhacday ama dib loo qiimeeyay.
Isku dheelitirka lacagaha
Dheelitirka bixinta Waa wax ay tahay in marwalba maskaxda lagu hayo marka la isku dayayo in la ogaado isbeddellada dhaqaalaha. Halkan, waxa la tiriyey waa socodka dhaqaale ee waddanku haysto waqti cayiman, oo caadiyan ah hal sano.
Dheelitirka lacagaha waxaa jira dhowr nooc oo loo xisaabiyo kala duwanaanshaha dhaqaalaha:
Isu dheellitirka ganacsiga. Isu dheellitirka ganacsigu waa kan lagu xisaabtamo dhoofinta noocyada badeecadaha, iyo sidoo kale noocyada dakhliga.
Isu dheellitirka alaabada iyo adeegyada. Halkan dheelitirka ganacsiga iyo dheelitirka adeegyada ayaa lagu daray. Halkani waa meesha adeegyada gaadiidka, xamuulka, caymiska iyo adeegyada dalxiiska, dhammaan noocyada dakhliga iyo kaalmada farsamada.
Hadhaaga xisaabta ee hadda jira. Halkan waxaa lagu darayaa badeecadaha iyo adeegyada dal, marka lagu daro howlaha lagu qabtay wareejinta. Dheelitirkan waxaa sidoo kale kamid ah dib u celinta dadka soo galootiga ah ee wadanka yimaada, deeqaha caalamiga ah ee la siiyo dalal badan ama deeqaha la siiyo ururada caalamiga ah.
Miisaanka aasaasiga ah. Halkan, waxaan ku haynaa wadarta koontada hadda lagu daray caasimadaha muddada-dheer.
Shaqo la'aanta oo ah mid dhaqaale ahaan kala duwan
Shaqo la’aanta ka jirta waddanku waa tirada dadka shaqo la’aanta ah ee waddan la siiyay. Qeexitaanka qofka shaqo la’aantu waa qofka raba inuu shaqeeyo laakiin aan heli karin shaqo oo aan loo wada helin dadka ku nool wadan aan wakhtigaas shaqeynayn.
Si loo ogaado heerka shaqo la'aanta dal, Boqolkiiba dadka shaqo la'aanta ah waa in lala wareego tirada dadka firfircoon.
Qofka la dhihi doono inuu soo galo shaqada, waa inuu ka weyn yahay 16 sano. Gudaha Isbaanishka, waxaa jira laba qaab oo lagu cabbiri karo heerka shaqo la'aanta waana iyaga adeegga gobolka shaqo ama baaritaanno lagu sameeyo shaqaalaha.
Tilmaamayaasha saadka iyo dalabka ee kala duwanaanshaha dhaqaalaha
Xaaladdan oo kale, tilmaamayaasha sahaydu waa kuwa innooga sheegaya waxa ku saabsan dalab dhaqaale. Tilmaamayaashaani waxaa ka mid ah tilmaamayaasha saadka warshadaha, tilmaamayaasha dhismaha iyo tilmaamayaasha adeegga.
Marka laga hadlayo tilmaamayaasha dalabka, waa tilmaamayaasha isticmaalka, tilmaamayaasha baahida maalgashiga iyo ugu dambeyn kuwa la xiriira ganacsiga shisheeye.
Isugeyn baahida iyo saadka
Qaabkan iskuday inaad qeexdo hada dhaqaalaha falanqaynta soo-saarka muddada iyo sicirka jira iyada oo loo marayo wadarta isu-geynta adeegyada iyo dalabyada. Waa aaladda aasaasiga ah ee lagu barto isbeddelada kaladuwan ee wax soo saarka iyo qiimaha iyada oo ay ugu wacan tahay qaab xisaabeed oo metelaya muuqaal ahaan. Thanks to aaladdan, waxay ka caawineysaa in la fahmo cawaaqibka siyaasadaha dhaqaale ee kala duwan iyo natiijada, si loo awoodo in loo falanqeeyo saameynta ay ku leeyihiin isbeddelada dhaqaalaha.
Qaybaha lagu fulinayo falanqeyntan ayaa ah kuwa keena iyo isku darka dalabka.
Wadarta wadarta: Waa matalaadda suuqa ee alaabada iyo adeegyada. Waxay ka kooban tahay adeegsi gaar loo leeyahay, maalgashi gaar loo leeyahay, kharashka dadweynaha, iyo xaaladaha dhaqaalaha furan ee dhoofinta saafiga ah (dhoofinta laga jaray soo dejinta).
Bixinta ayaa lagu daray: Waa wadarta guud ee badeecadaha iyo adeegyada lagu bixiyo qiimo celcelis kala duwan. Marka tusaalahan waxaa loo adeegsadaa in lagu falanqeeyo sicir bararka, koboca, shaqo la’aanta iyo, marka la soo koobo, doorka ay ku leedahay siyaasadda lacagta.
Isbedelada dhaqaalaha-yar: maxay yihiin?
Kuwa doorsoomayaashaasi ma yihiin waxay khuseysaa dhaqanka dhaqaale ee qofka. Waxay noqon karaan shirkado iyo macaamiilba, maalgashadeyaal, shaqaale iyo xiriirkooda suuqyada. Waxyaabaha u soo gala ciyaarta si loo falanqeeyo badiyaa waa badeecado, qiimayaal, suuqyo iyo wakiilo dhaqaale oo kala duwan.
Waxay kuxirantahay wakiilka shaqsiyeed ee la barto, daraasadaha qaar ama kuwa kale ayaa lagu dabaqayaa. Tusaale ahaan macaamiisha, aragtida macaamilka waa la tixgeliyaa. Laga bilaabo halkan, dookhaaga, miisaaniyadaha, waxtarka alaabada iyo noocyada alaabooyinka, waxay kuu ogolaanayaan inaad ogaato sida isticmaarku u dhici doono. Sidoo kale, shirkadaha, waxaa jira aragti soo-saare oo ah shaqo wax soo saar, kordhinta faa'iidada iyo qalooca qiimaha. Sida suuqyada, qaabdhismeedka iyo moodellada tartanka kaamil ah oo aan dhammaystirnayn ayaa u muuqda in la falanqeeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Crisis » Isbeddelada Dhaqaalaha
AAD AYAAN UGU Jecelahay SHURUUDAHA AAD KA QAATO DHAQAALAHA DHAQAALAHA EE AAD DIIRSATO. ANIGU WAAN RAACAY SHAQOOYADAADA, WAAN AHAY ARDAY MAAMULKA GANACSIGA SHAQAAHADIISANA AY SI AAD UGU FAAIIDAYSAN YAHAY SHAQAAHAYGA.
HAMBALYO SUSANA URBANO ..
MAGACYAHAY WAA JULIANA ..
Waxaan ka imid ECUADOR ..
Jawaab CARMEN JULIANA VERDESOTO CHANGO
Daabacaadyadan waa inay akhriyaan aadanaha oo dhan waxayna wax ka beddeli doontaa adduunka dhinacyo badan, sida ay muhiim u tahay in laga yeesho fikrad ah sida dhaqaalaha waddammada kala duwan u dhaqaaqaan oo markaa loo qaato waxyaabo kale. Salaan ka timid Quito - Ecuador.
Macluumaad wanaagsan; in kastoo xoogaa si xun loo qoray oo qaybo ka mid ahi iswaafaqsan yihiin.
Carlos R. Darajada Salayandia dijo
Isticmaalka isbeddelada dhaqaalaha waa mid aad muhiim u ah in dalku leeyahay ilo lagu kalsoon yahay, ilo dhab ah. Ujeeddooyinka iyo ujeeddooyinka waqtiyadeed ee is-beddelka dhaqaale ee aasaasiga ah, si loo ogaado isbeddelladooda dhabta ah iyo waqtiga ku habboon, si loo diyaariyo qorshooyinka iyo saadaasha dhaqaalaha qaranka oo dhammaystiran, si unugyada dhaqaalaha ay u gaaraan go'aanno sida ugu dhow ee xaqiiqada mustaqbalka, dejinta nidaam xakameyn ah oo ka mid ah doorsoomayaasha, iyo wixii ka sarreeya oo dhan si loo dejiyo habab cabbir si loo ogaado isbeddelladooda, natiijooyinkooda iyo tixgelinta ay ku leeyihiin dhaqaalaha unugyada dhaqaalaha.
Jawaab Carlos R. Grado Salayandia